Semalt: म्यानुअल बनाम स्वचालित SEO: कुन तपाईंको लागि सही छ?
जब तपाइँको व्यवसाय सुरू वा बढ्दै जान्छ, एक विजेता वेबसाइट डिजाइन गर्ने र निर्माण गर्ने पहिलो चरण हो। यद्यपि, चम्किलो नयाँ वेबसाइटमा ट्राफिक चलाउनु त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ, सायद अझ बढि। खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO) यस प्रक्रियाको लागि महत्वपूर्ण छ। यो पनि एक सापेक्ष सस्तो र सरल विधि यो सुनिश्चित गर्न को लागी तपाइँको साइट को प्रशस्त गुणवत्ता ट्राफिक हुन्छ।
एसईओ एक अत्यधिक कुशल र सस्तो संयन्त्र हो जुन एक वेबसाइटमा अत्यधिक लक्षित जैविक ट्राफिक चलाउन। एसईओले वेब सामग्रीलाई यस्तो अनुकूलन गर्दछ कि यो खोज इञ्जिन पृष्ठ परिणाम (SERP) मा शीर्ष स्थानमा छ।
वेबसाइटमा ट्राफिक जाँदा, एसईओ मेकानिजमेन्टले बिभिन्न कारकहरूलाई ध्यानमा राख्दछ जस्तै कीवर्डहरू, माध्यमिक कुञ्जी शब्दहरू, छोटो पूंछ कुञ्जी शब्दहरू, लामो पुच्छर खोजशब्दहरू, शीर्षक, मेटा विवरण, आन्तरिक लिंक, प्राकृतिक र सान्दर्भिक सामग्री, बाह्य लिंकहरू (ब्याकलिंक्स), आदि खोजशब्दहरू, आन्तरिक लिंक, शीर्षक, र मेटा विवरण पृष्ठमा एसईओ अन्तर्गत पर्दछ, जबकि विकास र ब्याकलिंक्स प्राप्त पृष्ठ पछाडि एसईओ अन्तर्गत छ। पृष्ठमा र अफ-पृष्ठ SEO मास्टरिंगले वेब पृष्ठलाई खोजी परिणामहरूमा उच्च मद्दत गर्दछ, अधिकतम जैविक ट्राफिकमा। कुञ्जी शव्द शीर्षक र मेटा वर्णनमा हाइलाइट हुनुपर्दछ। साथै, वेबपृष्ठ सामग्री प्रासंगिक र प्राकृतिक प्रयोग कुञ्जी शव्दहरू चाहिन्छ। यसले आगन्तुकहरूको बाउन्स रेट कम गर्न मद्दत गर्दछ, जुन लामो अवधिमा लाभदायक हुनेछ।
विश्वभरि थुप्रै कम्पनिहरू छन् जुन तपाईं र तपाईंको व्यापारलाई तपाईंको SEO साथ मद्दत गर्दछ। एक सम्मानित, कुशल कम्पनी छनौट सर्वोपरि हो। पहिले, यद्यपि, तपाइँले के चाहानुहुन्छ र तपाइँको रणनीति कसरी अगाडि बढिरहेको देखिन्छ भनेर पत्ता लगाउन आवश्यक छ।
उत्तम एसईओ अभ्यासहरू विचार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, तर मुख्य छनौट मध्ये एक म्यानुअल वा स्वचालित एसईओको वरिपरि हो। कुन उत्तम छ र कुन छनौट गर्नु पर्छ?
म्यानुअल SEO बनाम स्वचालित SEO
आज, त्यहाँ धेरै एसईओ सफ्टवेयर र प्लेटफार्महरू उपलब्ध छन् र यसले व्यवसाय र मार्केटि teams टोलीहरूलाई उत्तमको लागि के गर्ने निर्णय गर्न धेरै गाह्रो बनाएको छ। एक एसईओ प्लेटफर्मको साथ पकड प्राप्त गर्न वा एक एसईओ एजेन्सी भर्ती बीच छनोट विवादास्पद कारकहरूले भरिएको छ। धेरै जसो व्यापार सम्बन्धित छनौटहरूको रूपमा, लागत र समय महत्वपूर्ण विचारहरू हुन्। जे होस्, केहि निर्णय व्यक्तिगत प्राथमिकतामा तल आउँछ र यसले संगठनको रूपमा तपाईंको लागि के काम गर्दछ।
अधिकांश एसईओ सफ्टवेयर र प्लेटफर्मले फोरम पोस्टि key, कुञ्जीशब्द अनुसन्धान, निर्देशिका बुझाउने, ब्लग टिप्पणी गर्ने र सामाजिक बुकमार्क सहित एसईओ-सम्बन्धित कार्यहरूको सम्पूर्ण होस्ट गर्न सक्छ।
मैन्युअल एसईओ एक व्यक्ति वा एसईओ विशेषज्ञहरूको टीम शामिल गर्दछ हातले वेबसाइटमा विभिन्न अन-पेज र अफ-पृष्ठ एसईओ रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै। स्वचालित SEO, अर्कोतर्फ, सफ्टवेयरको प्रयोग (वा posirank.com जस्ता SEO प्लेटफर्म) को लागी एक साइट मा SEO रणनीतिहरू लागू गर्न।
सरल शब्दमा राख्नुहोस्, मैन्युअल एसईओ म्यानुअल एसईओ एजेन्सी वा विशेषज्ञहरूलाई भर्ती गर्न सन्दर्भित गर्दछ जसले तपाईंको वेबसाइट सामग्री अनुकूलन गर्दछ। स्वचालित एसईओ, अर्कोतर्फ, अवस्थित एसईओ उपकरण, सफ्टवेयर, र प्लेटफर्मको प्रयोगलाई वेबसाइट सामग्री अनुकूलित गर्न प्रेरित गर्दछ।
हेरौं प्रत्येक विधिको फाइदा र विपक्ष:
मैन्युअल एसईओ एक एसईओ टीम या व्यक्ति द्वारा बाहर की जाती है और कौशल र विशेषज्ञता को एक उच्च स्तर ले। व्यक्ति वा समूहले योजना गर्दछ र योजना बनाउँदछ र पृष्ठको र अफ-पृष्ठ एसईओ रणनीतिहरूको एक साइटको स्तर निर्धारण गर्न। प्रभावकारी मैन्युअल एसईओ समर्पित विज्ञहरु द्वारा गरिन्छ र यो विधि को प्रतिष्ठा को रूप मा सुरक्षा दिन्छ। त्यहाँ एक साधारण गलत धारणा छ कि Auto SEO स्पाम हो। मैन्युअल एसईओ पनि राम्रो गर्न देखिन्छ जब यो लि link्क निर्माणको कुरा आउँछ। अन्य उच्च श्रेणीकृत साइटहरूबाट ब्याकलिंक्स प्राप्त गर्नाले तपाईंको वेबसाइटको एसईओलाई मद्दत गर्दछ। यसले वेबसाइटको सामग्रीको विश्वास र सत्यता बनाउँदछ। SEO प्लेटफार्महरू र सफ्टवेयर मार्फत प्राप्त गर्न यो गाह्रो हुन सक्छ।
मैन्युअल एसईओ को फाइदा
राम्रो योजना र एसईओ विशेषज्ञहरु बीच रणनीति कार्यान्वयन
तपाईंको एसईओ टेकनीक र रणनीतिहरूमा १००% नियन्त्रण
प्राथमिकताहरू अनुगमन र प्रमाणित गर्न सकिन्छ
लिंक निर्माणको लागि अवसरहरू प्रदान गर्दछ
गुणस्तर ब्याकलिंक्सको चयन नियन्त्रण गर्नुहोस्
विश्वास र प्रामाणिकता प्रदान गर्दछ
मैन्युअल एसईओ का कमजोरीहरू
लामो समय सीमा - एक एसईओ विशेषज्ञ को वितरित को लागी लामो समय लिन सक्दछ
समय र समर्पणको उच्च स्तर आवश्यक छ
महँगो हुन सक्छ काम म्यानुअल हो, प्राय: एसईओ विशेषज्ञहरु को एक ठूलो टीम को शामिल
अटो एसईओको विपरीत, म्यानुअल एसईओ सदस्यता प्याकेजको रूपमा उपलब्ध छैन
मैन्युअल एसईओ ठूलो वेबसाइट को लागी अक्षम मान्न सकिन्छ
स्वचालित एसईओ ले तपाईंलाई एसईओ प्लेटफार्म/सफ्टवेयर प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ, म्यानुअल एसईओ कामबाट टाढा सर्दै। हालसालैका वर्षहरूमा, अनलाइन एसईओ सफ्टवेयर र प्लेटफर्महरू म्यानुअल विश्लेषणको लागि धेरै तरिकाहरूमा उत्कृष्ट भएका छन्। यसका साथै, धेरै वेबसाइट बनाउने प्लेटफर्महरू र ब्लगि plat प्लेटफर्महरू SEO भित्रका उपकरणहरू भित्र निर्मित प्रस्ताव गर्दछ। यी स्वचालित एसईओ प्लेटफार्महरु केहि खोजहरु खोजशब्द अनुसन्धान, ब्लॉग टिप्पणी, सामाजिक साझा, फोरम पोस्टिंग, र सामग्री सिफारिशहरु लाई प्रदान गर्दछ। अटो एसईओ कुशलतापूर्वक १००% नतिजाहरु प्रदान गर्दछ, म्यानुअल SEO भन्दा धेरै छिटो।
स्वचालित एसईओ को फाइदा
अटो एसईओ लागत प्रभावी छ - उपलब्ध सफ्टवेयर एक पटक खरीद हुन सक्छ।
धेरै अनलाइन SEO प्लेटफार्महरू सदस्यता-आधारित छन्, विभिन्न लागतहरूको लागि बिभिन्न सुविधाहरू प्रदान गर्दै
स्वचालित एसईओ छिटो छ - एसईओ प्लेटफार्ममा प्रयोग गरिएको एल्गोरिथ्मले कुञ्जी शब्दहरू र अन्य पक्षहरू मानव मस्तिष्क भन्दा छिटो विश्लेषण गर्न सक्छ।
कुञ्जी खोज अनुसन्धान र लिinking्कहरू स्वचालित रूपमा सुझाव दिइन्छ
समय खपत गर्ने कार्यहरू जस्तै साइट अडिटहरू सजिलै र प्रभावकारी रूपमा ह्यान्डल गर्न सकिन्छ - तिनीहरू आफैंले टुटेको लिंक चेकहरू, कुञ्जीशब्द घनत्व विश्लेषण, ट्यागहरू, मेटा वर्णन, र शीर्षक प्रस्ताव गर्दछन्।
Auto SEO प्लेटफर्मले सही र अप-टु-डेट परिणाम र विश्लेषण प्रदान गर्दछ
प्रतिस्पर्धीहरूको आन्तरिक लि ,्कहरू, कीवर्ड प्रतिस्पर्धा, र ब्याकलिks्कहरूको सजिलो विश्लेषण
स्वचालित एसईओ का कमजोरीहरू
स्वचालित एसईओको साथ एक प्रमुख समस्या ब्याकलिks्क निर्माण हो - यसले गुणस्तर ब्याकलिks्कहरू सुनिश्चित गर्दैन, जसले साइटलाई दण्ड दिन सक्छ र SERP मा कम रैंकमा परिणाम दिन्छ।
अधिक एसईओ प्लेटफार्मों प्राकृतिक प्रासंगिकता भन्दा कुञ्जी शब्दको मात्रामा फोकस गर्दछ - यसले आगन्तुक बाउन्स रेटलाई बढाउन सक्छ
स्वचालित एसईओ प्लेटफार्महरू द्वारा वितरित ब्याकलिks्कहरू जैविक यातायातको गुणवत्ता सुनिश्चित गर्दैन
सहि विकल्प छनौट गर्दै
एसईओ ले बनाउन वा तपाईंको वेबसाइट को सफलता भंग गर्न सक्छन्, यो सही एसईओ दृष्टिकोण चयन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तपाइँ तपाइँको वेबसाइट पृष्ठ SERP मा उच्च श्रेणीकरण गर्न चाहानुहुन्छ र त्यसकारण अधिकतम जैविक ट्राफिकमा ड्राइभ गर्नुहोस्। दुबै SEO दृष्टिकोणका उनीहरूका फाइदाहरू र नोक्सानहरू छन्। ठूला वेबसाइटहरू, उदाहरणका लागि, स्वत: SEO लाई म्यानुअल SEO भन्दा उनीहरूसँग बढी उपयुक्त हुन्छन्। जे होस्, जब यो विश्वसनीय ब्याकलिks्कहरू निर्माण गर्न आउँदछ, म्यानुअल एसईओको किनार हुन्छ। धेरै व्यवसायहरूले दुबै दृष्टिकोणहरू मिश्रण गर्न छनौट गर्दछन्। रणनीतिहरू र कार्यहरू जस्तै कीवर्ड रिसर्च, प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान, पढ्न योग्यता र कीवर्ड भोल्यूम स्वत: एसईओ द्वारा कायम गर्न सकिन्छ, जबकि योजना र भरोसा ब्याकलिks्कहरू म्यानुअल विधिद्वारा राम्रोसँग ह्यान्डल गरिन्छन्। आदर्श SEO वेबसाइट निर्माण गर्न कुनै द्रुत समाधान छैन। तपाईंको समय लिनुहोस् र यदि आवश्यक भएमा दुबै दृष्टिकोणहरू प्रयोग गर्नुहोस्, जसले निश्चित रूपमा भविष्यमा सफलताको लागि नेतृत्व गर्दछ।
मैले कुन AutoSEO प्लेटफर्म प्रयोग गर्नु पर्छ?
त्यहाँ धेरै वेबसाइट एसईओ सिस्टमहरू उपलब्ध छन् र राम्रो प्रतिष्ठाको साथ एक विश्वसनीय कम्पनीबाट पूर्ण उपकरण छनौट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। Semalt AutoSEO एक शीर्ष श्रेणीको प्रणाली प्रदान गर्दछ जुन तपाइँको एसईओ आवश्यकता को ख्याल राख्नेछ।
Semalt को हो?
२०१ 2013 मा सुरू भयो, Semalt एक अग्रणी पूर्ण-स्ट्याक डिजिटल एजेन्सी हो। तिनीहरू व्यापारको लागि सब भन्दा शक्तिशाली एसईओ उपकरणहरू प्रदान गर्दछ। Semalt सँग धेरै सन्तुष्ट ग्राहकहरू छन्, जसका विभिन्न किसिमका चम्किरहेका छन् समीक्षा कम्पनी वेबसाइट मा।
Semalt तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ:
सब भन्दा उपयुक्त कुञ्जी शव्दहरू चयन गर्दै
वेबसाइट त्रुटि सुधार
आला सम्बन्धित वेबसाइटहरुमा लिंक निर्माण गर्दै
तपाईं जहाँ भए पनि संसारमा, Semalt मा टीमले मद्दत गर्न सक्दछ। उनीहरूले अ languages्ग्रेजी, इटालियन, फ्रेन्च, टर्की, र अन्य धेरै समावेश गरी धेरै भाषाहरू बोल्छन्, त्यसैले भाषा तपाईं र तपाईंको व्यवसायको विकासको बीचमा बाधा हुनु आवश्यक छैन। Semalt का टोली सदस्यहरू SEO र अन्य वेब उपकरणहरूमा विशेषज्ञ छन् र तपाईंलाई र तपाईंको व्यवसायलाई मद्दत गर्न तयार छन्।
सही एसईओ विकल्प छनौट गर्दा तपाईलाई ठूलो महसुस हुन सक्छ। तपाईं आफ्नो व्यापार फस्टाउन चाहनुहुन्छ र तपाईंको वेबसाईट र यसको स्तर र ट्राफिक यस विकासको लागि महत्त्वपूर्ण छ। ठाँउमा एसईओ रणनीति ठाँउमा पुग्ने ब्यबसाय र डुब्ने व्यापार बीचको भिन्नता बनाउन सक्दछ। तसर्थ, यो तपाइँको अनुसन्धान गर्न र तपाइँको लागि के सही हो भनेर ध्यानपूर्वक विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ। अर्को चरण भनेको प्रतिष्ठित कम्पनीका विशेषज्ञसँग कुरा गर्नु हो जसले तपाईंको व्यवसायको आवश्यकताहरू सुन्नेछन र एक रणनीति सिर्जना गर्नेछ जुन तपाईं, तपाईंको उत्पादनहरू वा सेवाहरू र तपाईंको ग्राहकहरूको लागि अद्वितीय छ। Semalt का विशेषज्ञहरु तपाई संग कुरा गर्नेछन् र प्रश्नहरु सोध्नुहोस् ताकि तिनीहरु लाई एक निजीकृत रणनीति र सेवा बनाउन को लागी, प्रक्रिया प्रक्रिया भर तपाई संग चेक इन प्रगति अपडेट संग। Semalt को SEO को बारे मा थाहा छ - यो के गर्छन् उनीहरु। तिनीहरू तपाईंको लागि सबै कडा मेहनत गर्नमा गर्व गर्दछन्, तपाईंलाई तपाईंको व्यवसायको अन्य क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिदै। एकचोटि Semalt ले एक संस्थाको SEO लाई कब्जामा लिएपछि, तिनीहरूको वेबसाइटमा ट्राफिक बढ्छ र त्यससँग उनीहरूको ग्राहक आधार पनि बढ्छ। त्यो हेरचाहको साथ, तपाईं आफ्नो नयाँ बढेको ग्राहक आधारमा ध्यान केन्द्रित गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।